Mary Sharpe၊ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် - Reward Foundation
ပင်မစာမျက်နှာ မာရိကရှပ်, အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်
မာရိကရှပ် Glasgow တှငျမှေးဖှားနှင့်သင်ကြားရေး, ဥပဒေနှင့်ဆေးဝါးမှတဆင့်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုထံအပ်နှံနေတဲ့မိသားစုမှာကြီးပြင်းခဲ့သည်။ လူငယ်တစ်ဦးသည်အသက် မှစ. သူမစိတ်ကို၏တန်ခိုးကိုစှဲခဲ့စဉ်အမြဲကတည်းကအဲဒီအကြောင်းသင်ယူခဲ့သည်။
ပညာရေးနှင့် Professional ကအတွေ့အကြုံ
မာရိသည်ပြင်သစ်နှင့်ဂျာမန်ဘာသာဖြင့်ဂလပ်စ်ဂေါ့ဖ်တွင်စိတ်ပညာနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်ပညာဖြင့်မဟာဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။ သူမသည်ဥပဒေဘွဲ့ဖြင့်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ဘွဲ့ရပြီးနောက်သူသည်ရှေ့နေနှင့်ရှေ့နေအဖြစ်စကော့တလန်တွင် (၁၃) နှစ်နှင့်ဘရပ်ဆဲလ်ရှိဥရောပကော်မရှင်တွင် (၅) နှစ်ကြာလေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့လွန်အလုပ်ကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးထိုတွင်ကျူရှင်ဆရာအဖြစ် ၁၀ နှစ်ကြာခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် Mary သည်တရားရုံးမှယာဉ်ကိုလန်းဆန်းစေလိုသောစကော့တလန်ဘားရှိ Advocates ၏ဌာနသို့ပြန်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်သူမ Reward Foundation ကိုတည်ထောင်ရန်မလေ့ကျင့်ခဲ့ပါ။ သူမသည်တရားရေးကောလိပ်နှင့်တရားသူကြီးများအသင်း၏အသင်း ၀ င်ဖြစ်သည်။
မာရိသည် Reward ဖောင်ဒေးရှင်း၌ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေရာများစွာရရှိထားသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ဇွန်လတွင်သူသည်တည်ထောင်သူဥက္ကChair္ဌဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မေလတွင်သူသည်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ရာထူးသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးဘုတ်အဖွဲ့ကိုဥက္ကas္ဌအဖြစ်ပြန်လည်ဝင်ရောက်သည့် ၁၉၈၉ ခုနှစ်နို ၀ င်ဘာလအထိကျင်းပခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက ၂၀၂၁ မတ်လတွင်သူသည်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ်သို့တဖန်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
ရှေးခေတ်ရှေးခေတ်ကာလအထိလိင်ဆိုင်ရာချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ကျား၊ မလိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာဘွဲ့လွန်အလုပ်ကိုလုပ်ရန်မာရိသည် ၂၀၀၀-၁၁ ခုနှစ်တွင်ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုအရေးပါသောအချိန်တွင်ပေါ်ပေါက်လာသောပconflictိပက္ခဖြစ်နေသောတန်ဖိုးစနစ်များသည်အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအားဖြင့်ယနေ့ကမ္ဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးနေဆဲဖြစ်သည်။
မာရီသည်သူမ၏သုတေသနလုပ်ငန်းအပြင်တက္ကသိုလ်၌အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနည်းပြဆရာအဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆုရအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုနှင့်အတူစိတ်ပညာနှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံမှသုတေသနကို အသုံးချ၍ လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ အခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်ထိရောက်သောခေါင်းဆောင်များဖြစ်လာခြင်းတို့သည်စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်မှုကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ဖြစ်သည်။ သူမသည်စီးပွားရေးကျောင်းသားများအတွက်ဆရာအဖြစ်လည်းကောင်း၊ သိပ္ပံပညာရှင်စာရေးဆရာအဖြစ်လည်းကောင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သည် ကင်းဘရစ်-MIT ကအင်စတီကျု။ ဒါဟာနည်းပညာရဲ့မက်ဆာချူးဆက် (MIT) နှင့်ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်အကြားဖက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှသူမ၏ဆက်နွယ်မှုနှစ်ဦးစလုံးမှတဆင့်ဖြစ်နေဆဲ စိန့် ဦး Edmund ရဲ့ကောလိပ် နှင့် Lucy Cavendish ကကောလိပ် သူမတစ်တွဲတွဲအဖွဲ့ဝင်ဘယ်မှာ။
မာရိသည် ၂၀၁၅-၁၆ တွင်ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်စိန့်အက်ဒ်မန်ကောလိပ်တွင် Vis ည့်ပညာသင်အဖြစ်တစ်နှစ်နေခဲ့သည်။ ဤသည်ကသူမအားထွန်းသစ်စအပြုအမူစွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာတွင်သုတေသနပြုမှုကိုအလျင်အမြန်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်အတောအတွင်းသူမသည်နိုင်ငံတကာနှင့်နိုင်ငံတကာညီလာခံများတွင်စကားပြောခဲ့သည်။ မေရီသည်“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲခြင်းကိုကာကွယ်ရန်မဟာဗျူဟာများ” ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုရရှိနိုင်ခဲ့သည် ဒီမှာ (စာမကျြနှာ 105-116) ။ သူမလည်းတစ်ဦးအခနျးကွီးရေးသားခဲ့ပါတယ်ပူးတွဲ လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း - လေ့ကျင့်သူများအတွက်လမ်းညွှန် Routledge အားဖြင့်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီလမှစ၍ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကိုပထမဆုံးပိတ်ဆို့ခြင်းအထိမေရီသည် Lucy Cavendish College တွင်လာရောက်လည်ပတ်သည့်ပညာရှင်အဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုကာလအတောအတွင်းသူမတစ် ဦး ထုတ်ဝေခဲ့သည် စက္ကူ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အနာဂတ်သုတေသနပြုမည့်နေရာတွင် Dr. Darryl Mead နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
မာရိ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်အမူအကျင့်စွဲပေါ်တွင်အလုပ်ဆက်လက် အပြုအမူစွဲ၏လေ့လာမှုများအတွက်နိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ့အစည်း။ သူမသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဇွန်လတွင်ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ယိုကိုဟားမားမြို့၌ကျင်းပသောသူတို့၏ ၆ ကြိမ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံတွင်စာတမ်းတစ်ခုတင်ပြခဲ့သည်။ သူထုတ်ဝေသည် သုတေသနလုပ်ငန်း သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ဂျာနယ်များအတွက်ဒီထွန်းသစ်စဧရိယာပေါ်မှာ။ နောက်ဆုံးပေါ်စက္ကူတွေ့နိုင်ပါသည် ဒီမှာ.
နည်းပညာ Entertainment ကများနှင့်ဒီဇိုင်း (ကို TED)
TED အယူအဆသည်မျှဝေခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သောအတွေးအခေါ်များကိုအခြေခံသည် ၄ င်းသည်ပညာရေးနှင့်ဖျော်ဖြေရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတိုက်ရိုက်စကားပြောများနှင့်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရနိုင်သည်။ မေရီသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Edinburgh ရှိ TED Global သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ မကြာမီတွင်သူမသည်ပထမဆုံးစီစဉ်ဖွဲ့စည်းရန်တောင်းဆိုခံခဲ့ရသည် TEDx ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ကျင်းပခဲ့သော Glasgow ဖြစ်ရပ်။ တက်ရောက်သူများထဲမှတစ်ခုမှာသူ၏လူကြိုက်များမှုမှနောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်များကိုမျှဝေခဲ့သောဂယ်ရီ Wilson ဖြစ်သည် က်ဘ်ဆိုက် yourbrainonporn.com သည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏ ဦး နှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောဆွေးနွေးချက်တစ်ခုတွင် "မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု"။ ထိုအချိန်ကတည်းကထိုဆွေးနွေးမှုကို 13.6 အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြည့်ရှုခဲ့ပြီး 18 ဘာသာများသို့ပြန်ဆိုခဲ့သည်။
ဂယ်ရီ Wilson ကခေါ်သောယခုင်း၏ဒုတိယ edition အတွက်တစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စာအုပ်ထဲသို့မိမိအလူကြိုက်များဆွေးနွေးချက်တိုးချဲ့ အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စွဲမှု၏ & Emerging သိပ္ပံ: Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်။ သူ့အလုပ်၏ရလဒ်အဖြစ် လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏ ညစ်ညမ်းမှုပြန်လည်နာလန်ထူရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်မှာဂယ်ရီ၏သတင်းအချက်အလက်များသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အတူစမ်းသပ်ရန်သူတို့ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွန့်ခွာပြီးကတည်းကလျော့ကျသွားသည်သို့မဟုတ်ပျောက်ကွယ်သွားကြောင်းစတင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောနှင့်တန်ဖိုးရှိသောလူမှုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများအကြောင်းပြောကြားရန်အတွက် Mary သည် The Reward Foundation ကိုဒေါက်တာ Darryl Mead နှင့်ဇွန်လ ၂၃ ရက် ၂၀၁၄ တွင်ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သည်။
porn အသုံးပြုမှုသည်လူကြီးများအတွက်ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုတားမြစ်ရန်မရည်ရွယ်သော်လည်း ၁၈ နှစ်ကျော်သူများအတွက်ပင်လျှင်၎င်းသည်စွန့်စားမှုမြင့်မားသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူများအားလက်ရှိရရှိနိုင်သည့်သုတေသနမှရရှိသောအထောက်အထားများအပေါ် အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ခြင်းကိုအကြောင်းကြားရန်ကူညီလိုသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်သာယာဝပြောရေးအတွက်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုရေရှည်တည်တံ့စေရန်လိုအပ်သောလူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုများကိုအချိန်ပေးခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
ဒါဇင်များစွာသောကြောင့်ကလေးများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်မှုကိုလျှော့ချရန် Reward Foundation ကစည်းရုံးလှုံ့ဆော်သည် သုတေသနလုပ်ငန်း စာတမ်းများအရ၎င်းသည်သူတို့၏အားနည်းချက်အဆင့်တွင်ကလေးများအားထိခိုက်စေသည်ဟုဖော်ပြသည် ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု။ ကလေးများ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရောင်စဉ် နှင့်အထူးသင်ယူမှုလိုအပ်ချက်နှင့်အတူအထူးသဖြင့်အန္တရာယ်မှအားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ သိသိသာသာမြင့်တက်ခဲ့သည် ကလေးက-on-ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု အတိတ်7နှစ်များတွင်ညစ်ညမ်း-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာ၌အကြှနျုပျတို့၏အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်ကြသူကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ပင် သေဆုံးမှု။ ယူကေအစိုးရ၏ဆောင်ရွက်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည် အသက်အရွယ်စိစစ်အတည်ပြု အသုံးပြုသူများအတွက်၎င်းသည်ကလေးသူငယ်ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးအက်ဥပဒေအပိုင်း ၃ ကိုဘေးဖယ်ထားလိုက်သောကြောင့်အစိုးရအနေဖြင့်အွန်လိုင်းထိခိုက်မှုဥပဒေကြမ်းအပေါ်အရှိန်မြှင့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ဒါကငွေကျည်ဆန်မဟုတ်ပေမယ့်အစကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခု။ အန္တရာယ်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပညာရေးလိုအပ်ချက်ကိုအစားထိုးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥက္ကthe္ဌသည် 2014 မှစပြီးဖောင်ဒေးရှင်း၏လုပ်ငန်းတိုးတက်စေရန်ဆုများစွာရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်စကော့တလန်အစိုးရမှပံ့ပိုးထားသောလူမှုဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာတင်သွင်းခြင်းဆုအားဖြင့်တစ်နှစ်သင်တန်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ဒီမှာယူခဲ့ပါတယ် အရည်ပျော် Pot Edinburgh ၌တည်၏။ ၎င်းနောက်တွင် UnLtd မှစတင်သောဆု ၂ ခု၊ ပညာရေးဆိုင်ရာယုံကြည်မှုမှဆုများနှင့် Big Lottery Fund မှအခြားဆုနှစ်ခုတို့ရရှိခဲ့သည်။ မာရိသည်ဤဆုများမှငွေများကိုကျောင်းများရှိဒစ်ဂျစ်တယ် Detoxes များကိုရှေ့ဆောင်လုပ်ခဲ့သည်။ ကျောင်းများတွင်ဆရာများအသုံးပြုရန်အတွက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ပတ်သက်သည့်သင်ခန်းစာအစီအစဉ်ကိုလည်းသူမတီထွင်ခဲ့သည်။ 2017 တွင်သူသည်အထွေထွေယောဂီများတော် ၀ င်ကောလိပ်မှအသိအမှတ်ပြုထားသောတစ်နေ့တာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ကူညီခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုများအကြောင်းပညာရှင်များကိုလေ့ကျင့်ပေးသည်။
မေရီသည် ၂၀၁၆-၁၉ မှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလိင်ကျန်းမာရေးတိုးတက်စေရန်လူ့အဖွဲ့အစည်းဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့တွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအနေဖြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပြuseနာအားအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိင်ကုထုံးပညာရှင်များနှင့်လိင်ပညာပေးသူများအတွက်အသိအမှတ်ပြုသင်တန်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူမအားအလွဲသုံးစားပြုသူများအားကုသမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းအတွက်“ အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူအားတားဆီးခြင်း” အတွက်စာတမ်းတစ်ခုတွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအပေါ်သက်ရောက်မှုအကြောင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (၃) ခုကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၇-၁၉ မှ စ၍ Strathclyde တက္ကသိုလ်ရှိလူငယ်နှင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုစင်တာတွင်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူမရဲ့ကန ဦး အလှူငွေဟာ ၂၀၁၈ မတ် ၇ ရက်၊ မီးခိုးရောင်ဆဲလ်များနှင့်အကျဉ်းထောင်ဆဲလ်: အားနည်းချက်လူငယ်များ၏ neurodevelopmental နှင့်သိမြင်မှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အစည်းအဝေး.
2018 ခုနှစ်တွင်သူမတစ် ဦး အဖြစ်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့သည် WISE100 လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများ၏ခေါင်းဆောင်များသည်။